Pịa na-ebupụta Ngwaọrụ Google | Martech Zone
Fraịde, Ọktọba 5, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị na-agụ blog m oge ụfọdụ, ị maara na m bụ nnukwu onye ntanetị nke Clicky Web Analytics. Ọ bụ naanị ihe ịtụnanya, usoro dị mfe, enweghị ihe nyocha Weebụsaịtị dị mma maka ịde blọgụ. Ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu nke na edere m WordPress mgbakwunye maka ya!
Ugbu a abịa iGoogle Clicky Dashboard nke Scott Falkingham si Nzuzo di omimi:
Were niile arụmọrụ nke Clicky ma tinye ya n’ime Ngwa nke ọma! Chaị! Ikwesighi iji Google Gadget na ibe iGoogle gị. Enwere ike itinye Ngwaọrụ Google n'ebe ọ bụla yana obere ederede mkpado. Enwere m mmasị na Ngwa nke ukwuu nke na emelitere m ngwa mgbakwunye WordPress wee zipụ ya na Sean! Olileanya, ọ ga-ahapụ ngwa mgbakwunye Admin ọhụrụ yana Akụrụngwa agbado!
Iji nweta Ngwa, gaa na ịbanye Clicky. Nwere ike ibudata Ngwa na Google na WordPress ngwa mgbakwunye na Goodies peeji nke.
Tags: David Siteman GarlandEbumnuche Dị ỌsọBilie na n'eluAhịa Twitter
Ọkt 5, 2007 na 11:44 PM
Ahụrụ m ihe clicky n'anya n'anya, agbakwunyela m na nso nso a na blọọgụ m ma enwere m mmasị na njirimara ọrụ yana usoro ọ na-eji. Ọ na-amasị m ọtụtụ oge karịa Google Analytics, echere m na ọ kachasị n'ihi ụzọ o si ewepụta ozi ahụ n'ụzọ Google Analytics na-eme.
M ka nwere ma na saịtị m ma ọ bụrụ na m gbanwee obi m ma ọ bụ Google meziwanye metrics na achọrọ m data comparative.
Ọkt 6, 2007 na 6:12 AM
Echere m na nke ahụ bụ ihe kachasị amasị m, Dustin! M na-edebe Google Analytics gburugburu - Enwere m mmasị na ike graphing - karịsịa ike ịme nyocha nyocha na oge ụfọdụ. Ihe nkedo a na-acha flash nke oma.
Otu n’ime ihe ndị Clicky na-eme nke na-afụ ụfụ GA n’ime mmiri bụ ike soro ihe ndị a na-ebudata. Ebe ọ bụ na m na-etinyekarị ihe atụ na saịtị m, ọ bụ nnukwu atụmatụ m ga-ele!
Ọkt 8, 2007 na 9:53 PM
Abụ m nnukwu onye ofufe nke clicky. M ga-ahụ ya n'anya karị ma ọ bụrụ na enwere ike ịmepụta ihe ndị na - ewu ewu site na ịpị ka egosiputa na saịtị ahụ - na - enweta css.
Adịghị m coder, mana ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ime nke a * ndumodu ndumodu *